လိပ်ခုံးအကြောင်းပြောခြင်တယ် ရေး- ကိုငြမ်း (တောင်သာ) – Myanmar Biodiversity
မဖတ်ရသေးတဲ့ ဂျာနယ်ဟောင်းလေးတွေဖတ်ခြင်တာနဲ့ ညနေဘက် ဆင်မလိုက်ရပ်ကွက် ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်း နာလမ်းက မင်းမင်းကြည်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ပေါက်ဝရောက်ခါရှိသေး-
လိပ်သတင်းတွေ ဂျာနယ်တွေမှာ ခဏခဏပါနေပါ့လား… ဦးဝင်းကိုကို ကပြောပါ သည်… ဆိုတာတွေ လည်း.. မကြာမကြာဖတ်နေရပြန်တယ်လို့ …ဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုထွန်းကျော်က ပြောပါတော့တယ်။ သူ့ဘေးမှာ ဆ ရာဦးဥာဏ်က7Day Journal ဂျာနယ်ဖတ်နေပီး.. ဆိုင်လုပ်သားလေတစုလဲဘေးမှာဝိုင်းထိုင်နေကြ တာ တွေ့ လိုက်ရပါတယ်။
ဟုတ်ဗျို့… ကျနော်တို့ Wildlife Conservation Society (WCS) သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေး ဝက်ဆိုဒ် က သတင်းဖေါ်ပြထားတာတွေကို ဂျာနယ်တွေက… ကျနော်တို့ဆီကိုဖုံးနဲ့တမျိုး… အီးမေးလ်နဲ့ တဖုံ…လူကိုယ်တိုင် လာမေးကြတာတနည်း… အဲသလိုနည်းတွေနဲ့ ကျနော်တို့ပြန်ကြားပေးနေရပါတယ်…၂ ရက်လောက်က ရုပ်သံ MI နဲ့5Movie plus တို့က လာဗျူးသွားကြသေးတယ်ဗျ။
ဆရာတို့လုပ်ခဲ့တာ ၁၀ နှစ်လောက်တောင်ရှိနေတာ… အခုမှ သတင်းထွက်လာတယ်နော်။
အေး…အဲဒီမြန်မာ့တိုက်လိပ်(သို့)လိပ်ခုံး ကို သတင်းဋ္ဌာန တွေကိုသတင်းပေးခဲ့ပါတယ်…မန္တလေးမြို့က ရတ နာပုံတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့ ပုဂံမြို့ လောကနန္ဒာဘေးမဲ့တောဥယျာဉ်မှာ ရှိတဲ့… လိပ်ခုံးတွေသတင်းတွေ ကိုဘဲ ပေးခဲ့တာများတယ်။ ခန္တီးမြို့နယ်မှာ လိပ်ခုံးစောင့်ရှောက်နေတဲ့သတင်းကိုတော့… ခပ်မှိန်မှိန်ဘဲသတင်းတွေမှာ ဖေါ် ပြခဲ့ပါတယ်…အဓိက လုပ်နေတဲ့နေရာကို ဖေါ်ပြခြင်းမလုပ်ပါဘူး…ဖေါ်ပြလိုက်မိရင် ” သူခိုးကို မြေပုံလမ်း ညွှန်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ”… ကျနော်တို့ဌာနအနေနဲ့ကလည်း…ထိုက်သင့်တဲ့ အောင်မြင်မှုရှိလာမှ အ သိပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘာထားမျိုးထား…ရှိခဲ့လို့လဲဖြစ်ပါတယ်…
လင်းဖါးဖေါင်တော်ဦးစေတီနားကချင်းတွင်းမြစ်မှာ အကောင်(၃၀)နဲ့.. ထမံသီရွာဘေးက နန့်သလက် ချောင်းမှာ အကောင်(၃၀)လွှတ်တာလို့ …မြန်မာတိုင်းမှာဖတ်လိုက်ရတယ်…တော်တော်လေးလုပ်ခဲ့ရမှာ ပေါ့ဟု ဆရာဥာဏ်ကမေးလာပြီ။
ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ဟာ.. ၂၀၀၅ ခုနှစ် ထမံသီတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့ကျနော်တို့ သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ဟာ… ခနီး္တမြို့နယ်.. လင်းဖါးကျေးရွာလိပ်ခုံးနဲ့ပတ်သက်ပီး… မေးကြမြန်းကြတော့… လင်းဖါးရွာကတိုင်း လျှမ်ရှမ်းလူမျိုး(ရှမ်းနီ)တွေဖြစ်တဲ့ …ဦးဖိုးသန်း၊ဦးကျော်ရှိန်၊ ဦးအုန်းမြင့်နဲ့ ဗမာလူမျိုး ဦးရဲတင့်တို့က…လင်း ဖါး ဖေါင်တော်ဦးဘုရားရေလယ်ကျွန်းမှာ… လိပ်ခုံးအမ (၂)ကောင်တက်တယ်… လေ့လာမယ်ဆိုရင် …လင်းဖါးမှာ နေပီးလုပ်ကြပါလို့…တိုက်တွန်းအားပေးလာလို့ …ဒီဇင်ဘာလမှာ…လင်းဖါးရွာ ချင်းတွင်းမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းက သောင်ပြင်မှာတဲထိုးပီး… အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ထမံသီတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောက…အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦး ခင်မောင်မြင့်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်းတွေ သောင်ပြင်မှာအိပ်…စားပီး အလုပ်လုပ် ခဲ့ကြတယ်…ကျနော်တို့အတွက်လုပ်ငန်းအသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က မိကျောင်းဥကနေ သားပေါက်တဲ့ထိ နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွေအကြုံရယ်..လင်းဖါးရွာကလိပ်ဥရှာစားဘူးတဲ့…သူတွေဆီက အတွေ့အ ကြုံ တွေပေါင်းစပ်ပီးလုပ်တာ…ပထမဦးဆုံးနှစ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မေလမှာ… လိပ်ခုံးသား ပေါက် (၈၈)ကောင် ရခဲ့ တယ်။
ပထမ ဆုံးနှစ်မှာ..(၁)ကောင်ပေါက်ရင်ဘဲ အောင်မြင်တယ်လို့ …ကျနော့်ကို အားပေးတဲ့ နယူးယော့ (WCS)က Bill Holmstrom ဆိုရင်… ကျနော်တို့အဖွဲ့ကို ချီးကျူးခဲ့သလို… Australia က Dr.Gerald Kuchling ကလည်း …သူစတင်ခဲ့တဲ့သုတေသနအောင်မြင်လို့ …သိပ်ကို ဝမ်းသာရှာတယ်ဗျာ။ အဲသလို… ၂၀၀၆ ခုနှစ်က (ဂဂ) ကောင်ပေါက်ရာနောက်ပိုင်းမှာ.. အမြင်ဆုံး (၁၂၃)ကောင်အထိပေါက်အောင်လုပ်နုိုင်ခဲ့တယ်.. နောင်နှစ် တွေမှာ TSA လို့ခေါ်တဲ့… Turtle Survival Alliance လိပ်မျိုးဆက်ရှင်သန်ရေးအဖွဲ့က… ကျ နော်တို့ WCS နဲ့ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ …အခုဆိုရင် (၇၀၀) စုဆောင်းမွေးထားနိုင်ပါဘီ။
ဆရာ့အမေးကိုဆက်ဖြေရရင်… အခုမှစပြီး…စမ်းသပ်လွှတ်ဆင့်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခါစဘဲရှိပါ သေး တယ်…. မူယင်း ဒေသကမွေးဖွားလာတဲ့ လိပ်သားပေါက်တွေ…အရွယ်ရောက်လာလို့ သူတို့ရဲ့ မူယင်းဒေသ မွေးဋ္ဌာနေကိုဘဲပြန်လွှတ်နိုင်ပီမို့ …ရာနှုံးတစ်ဝက်အောင်မြင်ခဲ့ပီလို့ ပြောခြင်ပါတယ်…မွေးဋ္ဌာနေသဘာ ဝချင်း တွင်းမြစ်ထဲကို..အခုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ သားသမီးတွေကပေါက်ဖွား လာမယ့် မြေးတွေ…မြစ်တွေရလာ တဲ့အ ဆင့်ရောက်မှ..လုံးဝရာနှုံးပြည့်အောင်မြင်တယ်လို့ယူဆနိုင်မှာပါ… အခုလွှတ်လိုက်တဲ့ အကောင် ၆၀ ဟာ ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယော့မြို့ သားငှက် ထိန်းသိမ်း ရေးအဖွဲ့ချုပ်က တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တွေ..ဇီဝက မ္မ ဗေဒဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင် သူတွေ…ဓါတ်ခွဲ ခမ်းမှုးတွေနဲ့ လိပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့… မျိုး ရိုးဗီဇစစ်ဆေးထားပီး….Microchip Number လို့ခေါ်တဲ့ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကရိယာလေး ထည့်ထား ပီးသား တွေ ပါ…အကောင် ၆၀ မှာ ၃၀ ကို Radio Transmitter တပ်ထားပါတယ်..ဒါတွေကို ဦးဥာဏ် ဖတ်ထား… သိ ထား သလို…လွှတ်တဲ့နေရာ တွေက လင်းဖါးနဲ့ ထမံသီရွာဘေးကနေချင်းတွင်းမြစ်ထဲစီးဝင်တဲ့ နန့်သလက် ချောင်းထဲ ကိုလွှတ်တာပါ….
ဘာဖြစ်လို့ လိပ်ခုံးလို့၊ တိုက်လိပ်လို့ခေါ်ရတာလဲ… လို့ မေးလာသူက ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ညောင်နီကျင်းသားလေးဖြစ်တယ်။
အေးကွ…သူ့ရဲ့ကျောကုန်း ဟောသလိုကို ကုံးကုံး၊ ခုံးခုံး၊ လေးကိုင်းလေးလိုကွေးနေတာ… အရောင်က ညိုမဲမဲ…။ ကျနော်က လက်နှစ်ဘက်ကိုလေးကိုင်လေးလိုဖြစ်သွားအောင်…ကွေးကွေးလေးလုပ်ပြလိုက်တယ်။ လိပ်ခွံကိုထောင်ပီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်… မဲမဲပြောင်ကုန်းနေတဲ့… ကျောပြင်(ခါးကုန်းကြီး) လိုတွေ့ရမှာကွ … ဈေးမှာရောင်းတဲ့ မဲမဲမုန့်တွေကို ဒို့အညာသားတွေကို…ချစ်လို့…ခင်လို့ စကြ…နောက်ပြောင်အနေနဲ့… အညာ သားကျောကုန်းလို့ အမည်ပေးထားတာ မဟုတ်လား။ အဲသလိုပုံမျိုးပေါ့။ဟောသလို မျိုးပေါ့လို့ပြောရင်…စားပွဲခုံ ပေါ်ကို ရေနွေးဆွတ်ပီးအရုပ်ဆွဲပြလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးကို…လိပ်ခုံးဆိုတာကို ပီပီ ပြင်ပြင်…လက်တွေ့မြင်ဘူး အောင်ပြခြင်ပေမယ့်နောက်ရက်တွေမှဘဲ ဓါတ်ပုံပြရတော့မယ်။စကားဖြတ်ပီးပြောရဦးမယ်.. လိပ်ခုံးဆိုလို့… ဟို တုံး… ကလိပ်ခုံးဆိုတဲ့အဆောက်အဦကြီးတခုရှိခဲ့ဘူးတယ်..ပြည်လမ်း ဆေးတက္ကသိုလ် (၁)ဝင်း ထဲမှာ …ပြပွဲ တွေအများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့..ခန်းမကြီးပေါ့… ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်တုံးက လိပ်ခုံးကိုဖျက် ပစ်လိုက်ကြပြီ ..အဲဒါကို..ယခင် ..ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံက ဆောက်ပေးခဲ့တာ..အခုတော့ ရုရှနိုင်ငံ။
ခုနှစ်စဉ်ကြယ်လို ကွေးကွေးလေးဥတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုတုံး။ မေးလာသူက မုံ့ဆရာ၊ ဂွေးချိုရွာသား၊ ချောက်မြို့ နယ်က။
ဟုတ်ပီ ဂွေးချိုရ၊ ဒီလိုကွ… ပြာသိုလမိုက်… လိပ်တိုက်သောင်စမ်းနဲ့ ပြာသိုလမိုက်… လယ်ကောစိုက် … လိပ်တိုက်သောင်ပြင်…သမုဒ်တင် ဆိုတဲ့… ဆိုရိုးစကားလေးတွေကို… တံငါအိုကြီးတွေဆီက… ငါတို့မှတ် သား ခဲ့ရပါတယ်.. ဒီစာချိုးအရ…လိပ်တွေဟာ…ပြာ သိုလမှာ မြစ်ကမ်းသောင်ပြင်ပေါ်တက်ပီး… ဥဥမယ့်နေရာကို ရွေး ချယ်ကြတယ်လို့ ….ရှေးလူကြီးသူမ တွေမှတ်သားထားခဲ့တာ။ သောင်စမ်းပီးမှဥတဲ့လိပ်က …မြန်မာ့တိုက် လိပ် (ဝါ)လိပ်ခုံးတွေဖြစ်နေတာရယ်… ပြာသိုလ(ဆောင်းရာသီ)မှာဘဲဥတာမို့…အဲဒီ လိပ်ခုံးတွေ ကိုကြည့်ပီး… ရှေးလူ ကြီးသူမတွေ…မှတ်သားရရွတ်ဆိုလာတာလို့ သုံးသပ်ရတယ်။ ရေတက်ရေကျနဲ့ အမြင့်ဆုံး တက်မဲ့ရေ အမှတ်.. နေရာကို…လိပ်ဥတဲ့နေရာတွေကြည့်ပီးဟိုးတုံးကမှတ်သားခဲ့ကြသကိုး။
ပြာသိုမှာတက်ပီးဥတဲ့ဥစမ်းဆိုတာကလည်း… ၃ လုံးအများဆုံးဘဲအစမ်းဥတာ… ဥစမ်းအမဟာ… နောက်တကြိမ်တက်ဥတော့ သူအရင်ဥစမ်းဥခဲ့တဲ့သောင်ပြင်မှာ အစိမ်တက်ဥတော့တာပါဘဲ။ လိပ်ခုံး ဥအု တာ ကလည်း…သိပ်ကို အံ့သြဘို့ကောင်းတယ်။ လိပ်တော်တော်များများဟာ ဥကျင်းတစ်ကျင်း ထဲမှာဘဲ တစ်ကြိမ် တစ်ခါတည်းအုချလိုက်တာချဉ်းဖြစ်ပေမယ်လို့ ဒို့မြန်မာမျိုး…လိပ်ခုံးအမကတော့….ကမ္ဘာ့ပြိုင်စံရှား လိပ် မလို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ကမ္ဘာမှာ မြန်မာမှာဘဲရှိတယ်လို့ ကြွားသော်…ကြွားနိုင်တယ်။ ခန္တီးဒေသက လူတွေယူဆ သလို…အမည်ပေးကြသလို… ခုနှစ်စဉ်ကြယ်ပုံ…ဥကြတာပေါ့။ ဒို့အတွေအကြုံအရ ခုနှစ်စဉ်… (၇) လုံး တောင် မကပါဘူး..(၁၀)ကျင်းထိတောင်ဥတယ်… တစ်ညတည်းမှာ လိပ်ကျင်း ၁၀ ကျင်းလောက် တူးပီးဥရတာ။ ပျမ်းမျှ တစ်ကျင်းစီမှာ.(၃) လုံးကနေပီး.. (၈) လုံးလောက်အထိဥပါတယ်။ (ဂ)ကျင်းစလုံးက ဥတွေကို ရေ တွက်ကြည့် ရင်… အလုံး (၃၀)ကနေပီး…(၅၀) အထိရှိပါတယ်။ အမတစ်ကောင်ဟာ တနှစ်ကို ၂ ကြိမ်ဥတယ်ဆိုတာလက် တွေ့သိရတယ်။ လိပ်တက်တဲ့နေမျိုးမှာ ရက်မြတ်အခါကောင်း …နေ့ကောင်းတွေမို့ …အိမ်သစ်ဆောက်တာ တွေ…လုပ်ငန်းသစ်လုပ်တာတွေ အထက်ချင်းတွင်းဒေသမှာရှိနေတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လဲ ..လူသေအခေါင်းလိုလဲ တန်းပီးဥဥတာလဲရှိပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးအနေနဲ့မြန် မာအက္ခရာ ” ဝ “ဝလုံး၊ ” တ” တဝမ်းပူ ပုံဏ္ဍာန်လိုထင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘဲအတွေ့ ရများပါ တယ်။ ကျနော့်လက် ထောက် ကိုကျော်မိုးကတော့.. လူသေကိုသောင်ပြင်မှာမြေမြုပ်ပီး…သဲဖို့ထားတဲ့ ပုံစံမျိုး တွေ့ဘူးလို့..သူ့ ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ကျနော်ကြည့်ရဖူးပါတယ်။ အဲသလိုပုံစံဆိုရင်…ဥရှာရ.. တော် တော်…ခက်တယ်လို့ သူပြောပါတယ်။ အခုအထိ..ဟိုတုံးက ပြောလာတဲ့ ” ပြာသိုလမိုက်..လိပ်တိုက် သောင်စမ်း ” ဆိုတဲ့အမှတ် သင်္ကေတဟာ… မှန်ကန်နေတုံးပါဘဲ။
လိပ်ကျဉ်းတွေ… ဥတွေကိုဘယ်လိုရှာကြလဲလို့ မေးလာပြန်သူက… ကိုထွန်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်တွေဟာ ပြာသိုလထဲရောက်ပီဆိုရင်… ဥစပ်းဥကြတာမို့… သုတေသနစလုပ်တဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ဆို ရင်..လင်းဖါးရွာနေပီး အထက် (၁၀) မိုင်… အောက်ဖက်ကို (၁၀) မိုင် ကို …တရက်ခြားထွက်ပီး ဒေသခံတွေ ပြောတဲ့လိပ်သောင်တွေကို ကျနော်တို့ဋ္ဌာနပိုင် လှေနဲ့ ကျနော်တို့ရယ်… ထမံသီဘေးမဲ့တောဝန်ထမ်းတို့ဟာ… နေရောင်ခြည်မြင်ရတဲ့ ၈ နာရီလောက်ဆိုရင်…စက်လှေမောင်းပီး..ကြည့်ရတယ်။ မနက်တိုင်း …ဆောင်းတွင်းဆို ရင် …အထက်ချင်းတွင်းမှာ ရေပြင်ကထွက်လာတဲ့ ရေငွေ့တွေနဲ့…အေးနေတဲ့လေတွေ တွေ့ကြပီး မှိုင်းတွေဖြစ် လာလို့… မမြင်ရဘူး။ အဲသလိုဖြစ်နေတာကို… မှိုင်းတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ မှိုင်းကွဲတဲ့နံနက်( ၈) နာရီလောက် ရောက်မှ… လင်းဖါးအထက်ကို(၁) ရက်သွား… နောက်(၁) ရက်မှာ လင်းဖါးအောက်ဖက်ကိုတရက်သွား ။ အဲသ လိုအလှည့်ကျစနစ်နဲ့ …နေ့တိုင်းသွားကြည့်ရတယ်။
သောင်ပြင်မှာ လိပ်တက်တယ်… မတက်ဘူးဆိုတာကတော့…လိပ်တက်ထားရင် …လိပ်ခြေရာတွေက သံချပ်ကာအမြောက်ရဲ့သံပတ်ဘီးခြေရာတွေလိုဟာမျိုး…ကင်းခြေမြားခြေထောက်လိုမျိုး… ပျဉ်ချပ်ကြီးတစ်ချပ် ကိုသောင်ပြင်ပေါ်ကဆွဲချလိုက်တော့ ….ထင်ပီးကျန်ရစ်နေတဲ့အရာတွေလိုဟာကို… အဝေးကမြင်ရတယ်။ တခါ တလေအဝေးကနေပီး… လိပ်တက်တဲ့အတက်လမ်း… အဆင်းလမ်းတွေကိုတောင်မြင်ရတယ်။ အတက်လမ်း မှာတော့… ခြေရာ…ဗိုက်ရာတွေနဲ့ အမြီးအရာတွေက သောင်ပြင်မှာ…တော်တော်လေးထင် ထင်ရှားရှားတွေ့ ရ တယ်။ ဥတွေဘိုက်ထဲမှာရှိနေတော့….သူ့ခန္ဓာကိုယ်က လေးနေမှာကိုး။ အဲ… အဆင်းခြေရာကတော့… အ တက်ခြေရာလောက်မထင်ရှားတော့ဘူး.. ဥချလိုက်ပီးဘီမို့… ပေါ့သွားဘီလေ။
အဲသလိုမြင်လိပ်တက်…လိပ်ဆင်းထားတဲ့ စွတ်ကြောင်းကြီးတွေ..တွေ့လို့ကတော့… သောင်ပေါ် တက် ပီးကြည့်။ သောင်ဖွေးဖွေးပေါ်မှာ ရေစိုတွေနဲ့ဖြန်းထားတဲ့နေရာတွေ…တွေ့ ဘီဆိုရင်.. အဲဒီနေရာမှာဥထား တာ သေချာပီမို့ ဖေါ်ကြပေတော့။ ဒီနေရာမှာ…ဥဖေါ်နည်းတတ်ဖို့လိုလာဘီ။ လိပ်ဥ…လိပ်ဥ။ ငယ်ငယ်တုံးက လိပ်ဥ ဖွက်တမ်း ကစားခဲ့ရတာကို… အမှတ်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ လိပ်ဥဖေါ်တတ်တဲ့ သူမှဖေါ်တတ်တာ… မဖေါ်တတ် လို့ကတော့…တစ်လုံးမှရှာရမှာမဟုတ်။ လိပ်ဥရှာတတ်တဲ့ လင်းဖါးက ဦးဖိုးသန်းတို့…ဦးမောင်ညှိတို့ကို အခေါ် ခိုင်းပီးအဖေါ်ခိုင်းရတာ။ ဖေါ်တဲ့အခါ…. ကိုင်းပင်အရိုးခြောက်ကို…လက်နှစ်ဘက်နဲ့ဆုပ်၊ ခါးကုန်းပီး သဲပြင်ကို ၄၅ ဒီကရီ( ခါးကုန်းထိုးတာဆိုတော့ အဲသလောက်ဒီကရီတော့ရှိလိမ့်မယ်)စောင်းပီး…စွပ်ခနဲ..စွပ်ခနဲ ထိုး ထိုးပီး ရှာရတာ…မောင်။
ကိုင်းပင်ဆိုတာ ဒို့အလယ်ပိုင်းသားတွေ မြင်ဘူးကြမှာမဟုတ်ဘူး… ပြောင်းဖူးရိုး… ဒါမှမဟုတ် နှံစား ပြောင်းရိုး(ချိတ်ပြောင်း)လိုဟာမျိုးပေါ့…မောင်ရင်။ ကိုင်းကျွန်းမီ… ကျွန်းကိုင်းမီ ဆိုရိုးစကားထဲက ကိုင်းပင်ကို ပြောတာနော်။ ကိုင်းရိုးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့နေရာဟာ.. အားစိုက်ထိုးရပီး… ခပ်ကျပ်ကျပ်ပဲရှိနေတယ်ဆိုရင် …ဥထားတဲ့ နေရာ မဟုတ်သေးဘူး…အဲ… ထိုးလိုက်လို့ ကိုင်းပင်ရိုးဟာ လက်ဆမထိန်းနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွာပီး… ရွှတ် ခနဲဝင်သွား လို့ကတော့… သေချာပီမောင်.. ဒီနေရာမှာ ဥကျင်းရှိနေပီ.. ဥတွေဖေါ်လို့…ရှာလို့မ ရသေးဘူး ..ဆက်ထိုးပီးရှာ ရဦးမှာမို့…အဲ ဒီနေရာကို ဝါးသို့မဟုတ် ကိုင်းပင်ရိုးခြောက်နဲ့ထိုးစိုက်ပီးသင်္ကေတပြထားဦး …ကုန်းကုန်း …ကုန်း ကုန်းနဲ့..စွပ်ကနဲ့ စွပ်ကနဲ့ထိုးနေတဲ့ အဘကို ဒို့တစ်တွေဝိုင်းကြည့်နေနှင့်အုံး…။
နောက်ဆက်ပီး ပထမကျင်းရှာတဲ့အတိုင်းဆက်ထိုး၊ ခုနလိုဘဲ ရွှတ်ခနဲဖြစ်ပီဆိုရင် သင်္ကေတပြထား။ ဆက်ရှာဆက်ကြပေတော့။ ဥရှာပေးတဲ့ ဦးဖိုးသန်းတို့ …ဦးမောင်ညှိတို့ဆိုတာ… နား.. နားပီး..ထိုး..ထိုးနေရတာ၊ ဆက်တိုက်မထိုးနိုင်ဘူး… အသက်တွေကြီးနေမှကိုး။ အဲသလိုနည်းအတိုင်းဆက်ထိုး..။ထိုးရင်း.. ထိုးရင်း… ဒုတိ ယ….တတိယ….စတုတ္တ….ဆက်တိုက်ရှာရတာ။ နောက်ဆုံးမတော့…. ရွှတ်ခနဲ့..ဖွတ်ခနဲ့ မဝင်တော့ဘူး …မာ မာကြောကြောနေရာတွေကိုဘဲထိုးမိနေတော့ပီဆိုရင်တော့…. ဆက်မထိုး တော့ဘဲ.. ဥရှာဖွေမှုပီးဆုံးသွားဘီမို့ …ဥရှာပေးတဲ့ ဆရာက ဖေါ်တော့လို့ သူပြောမှ…သူ့ခွင့်ပြုချက်ရမှ ဥကျင်းထဲကဥတွေရှာဖွေရေး ဥနိုက်တဲ့ကိုယ် တို့အဖွဲလုပ်ငန်းစရတော့တာ။ ခေါင်းခြင်းဆိုင်ပီး ဥကျင်းဖေါ်ကြရတာ…သဲတွေကို အပေါ်ယက်တင်…. အဲဒီသဲ တွေက ပြန်ပီး ပြိုကျ၊ ပြန်ယက်တင်။ ဥကျင်းကနက်လာရင်လက်ထောက်…ခါးကုန်း…. ဖင်ကုန်းပီး သဲတွေယက် တင်ကြရတာ…ယောက်ျားတွေချဉ်းဘဲဆိုတော့ လိပ်ဥလည်းဖေါ်ရင်း၊ ဥမှားစမ်းရင်း…ပြောင်ကြနောက်ကြနဲ့…ပျော်စရာကောင်းသားကွ..။
လိပ်ဥတွေဖေါ်တဲ့အခါ… လိပ်ဥတွေ နေပူမမိရအောင်… ထီးဆောင်းပေးထားရတယ်။ နောက်ပီး …ဥ ကျင်းထဲမှာ လိပ်ဥရှိနေတဲ့အနေအထား…ပုံစံအတိုင်းပေါ့။ ဥပမာ- ထောင်နေတဲ့အနေအထားရှိတဲ့ ဥဆိုရင် အဲ သည်အတိုင်း သယ်ယူမဲ့တောင်းထဲက… သဲတွေအပေါ်ကိုတင်ပေးရတယ်။ အညင်သာဆုံး…လှုပ်ရှားမှုအနည်း ဆုံးနဲ့ဖေါ်ရတယ်၊ သယ်ရတယ်။ဥအရွယ်အစားလား….အငယ်ဆုံးက ဘဲဥအကြီးစား…အကြီးဆုံးက ငန်းဥ… မိ ကျောင်းဥလောက်ရှိတယ်…မဒမ်းနဲ့သက်ကြီးကောင်ဥတွေက အရွယ်ကွာပါတယ်…. ဥတွေအား လုံးယူ ပီးဘီ ဆိုရင်… ကျနော်တို့ စက်လှေနဲ့သယ်ယူတာ မျိုးမ လုပ်ပါရဘူး… ကျနော်တို့ စက်လှေက …မြင်းကောင်ရေ ..ပါဝါ များတာမို့လို့… စက်လှေတုံခါမှုကြောင့် ဥတွေ ကိုထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါ။ လောင်း လှေပေါ်ကို ဥထဲထားတဲ့ တောင်း တွေ… ခြင်းတွေတင်ပီး…ကျနော်တို့စက်လှေက လောင်းလှေကိုကြိုးနဲ့ ဆွဲပီး… လိုရာနေရာကို ရောက်အောင် ပို့ပေးရပါတယ်။
အဲသလိုလိပ်ဥတွေရှာဘီဆိုရင်… လင်းဖါးက ဦးဖိုးသန်း နဲ့ ဦးမောင်ညှိတို့ဟာဆိုရင်.. ကျနော်တို့ဟာ သူတို့ရှိမယ့်နေရာကိုလိုက်ရှာပီး… လိပ်ဥရှာခိုင်းရတာ အကူအညီတောင်းခဲ့ရတာ။ သူတို့ကလည်း ကျနော်တို့ အလုပ်ဆိုရင်… သူတို့လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေထားရစ်ခဲ့ပီးချက်ချင်းလိုက်လာပီး ဥတွေရှာပေးခဲ့တာ။ အခုတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ကွယ်လွန်သွားပါတယ်….သူတို့ သွားနှင့်နေပြီ ပေါခင်ဗျာ….။ လိပ်ဥှရှာတဲ့ လုပ်ငန်းကိုတော့ ဦးမောင်ညှိရဲ့သား လဲဖြစ်… ဦးဖိုးသန်းရဲ့ တူလည်းဖြစ်တဲ့… ဦးကျော်ရှိန်က…အမွေဆက်ခံ ထားလို့ ကျနော်တို့လုပ်ငန်းကို ဆက်ပီးကူညီနေတုံးပါဘဲ။
ဒီလုပ်ငန်းကို ဆရာတို့အဖွဲ့ဘဲလုပ်နေတာလား… အခြားဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေပါသေးလဲ။
ကျနော်တို့ တတွေဟာ ဒီလုပ်ငန်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဋ္ဌာ… သစ်တော ဦးစီးဋ္ဌာန…ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဋ္ဌာနလက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ ထမံသီ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောက ဝန်ထမ်းတွေရယ်.. ဒေသခံတွေရယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်အ ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဋ္ဌာ( ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်)တို့နဲ့ပေါင်းပီး Wildlife Conservation Society (WCS) နဲ့ Turtle Survival Alliance (TSA) တို့ဟာ… မြန်မာ့ဋ္ဌာနေဖွားလိပ်( အခြားဘယ်နိုင်ငံမှဒီလိုလိပ်မျိုး) ကို မြန်မာ့ မြေက အထက်ချင်းတွင်းဒေသမှာဘဲ သဘာဝအလျောက်ကျန်ရှိနေတဲ့ လိပ်ခုံးများမျိုးမတုံး အောင်…မျိုး ဆက် ပျံ့ပွားရေးနဲ့ အခြားနေရာတွေမှာလဲ အခုလိုလွှတ်ပေးနိုင်ဘို့.. ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပါ…..ကဲ…ကဲ ကျနော်တို့စ ကား ဝိုင်းလေး…နားလိုက်ကြစို့ရဲ့….
ဟုတ်ကဲ့ပါ…အခုလိုမအားလပ်တဲ့ကြားက…ရှင်းလင်းပြောကြားပေးတဲ့ ဆရာ့ကို ကျနော်တို့ ပြည်သူ့ အ တွက်… မြန်မာ့အသံ..အဲဟုတ်ပေါင်…မင်းမင်းကြည် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်က…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….
လင်းဖါးကျေးရွာမှ ဦးမောင်ညှိနှင့် ဦးဖိုးသန်း သို့အမှတ်တရများစွာဖြင့်——
(ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဂျာနယ် ဇန်နဝါရီ၊၂၀၁၆ ထုတ်တွင်ဖော်ပြပါရှိသောလိပ်ခုးံအကြောင်းပြောပြချင်တယ်ဆောင်းပါးကို စာရေးသူ၏ခွင့်ပြုချက်အရပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
လိပ်မျိုးစိတ်ရှင်သန်ရေးအဖွဲ့ (TSA) ဥက္ကဌ Rick Hudson နှင့် လိပ်ခုံး